सामाजिक सञ्जालले कसरी बि गार्छ व्यवसाय ?
Homeबिबिधसामाजिक सञ्जालले कसरी बि गार्छ व्यवसाय ?
बीबीसी । ह्याकरदेखि आक्रोशित ग्राहक वा सामाजिक संजालमा विरोधको सानो पोस्टले पनि व्यवसायमा ठूलो चोट पुग्न सक्छ । यसरी सामाजिक संजालले केही मिनेटमै व्यवसायिक ब्रान्डहरुमाथिको विश्वास चकनाचुर पार्न सक्छ ।
रेपुटेसन म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी लन्सन्सका डिजिटल परामर्शकर्ता पिट नट भन्छन्, “कुनैपनि कम्पनीको प्रतिष्ठालाई सबैभन्दा ठूलो खतरा अहिले सामाजिक संजालबाटै छ । किनकी त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएन भने वास्तवमै कम्पनीको आर्थिक र सामाजिक दुवै पक्षमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।”
यसमा पनि ‘फेक न्युज’ वर्तमान व्यवसायहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति साबित भइरहेको छ । फेसबुक, ट्वीटर लगायतका संजालहरुले यस विरुद्ध विभिन्न कदम चलाएपनि अझै समस्याको पूर्ण समाधान हुन नसकेको पाइएको छ । जस्तै गत मे महिनामा मात्र सामाजिक संजालमा बेलायतको मेट्रो बैंकले आर्थिक कठिनाइहरुको सामना गरिरहेको भन्ने अफवाह फैलिएपछि कम्पनीको शेयारमा ११ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । जेनेभास्थित इन्टरनेट सुरक्षा कम्पनीका लिया कोलोछेन्को भन्छन्, त्यसको परिणाम यो भन्दा खतरनाक हुन सक्थ्यो ।
त्यसैगरी ह्याकरहरुले पनि सामाजिक संजालमा गलत समाचार प्रचार गरेर कम्पनीलाई ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने लिया बताउँछन् । उनले भने, ‘मानिलिनुहोस् उनीहरुले बीबीसीको अकाउन्ट ह्याक गरिदिए र इरानले आणविक बम खसाल्ने समाचार प्रकाशित गरे भने त्यसको असर हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ अझ सो समाचार अरुले पनि साभार गर्ने हो भने यसले अतुलनीय क्षति गराउनेछ । ’
तर सामाजिक संजालका पोस्ट गलत भएमा मात्र ब्रान्डको नाम खराब हुँदैन । कहिलेकाहिँ सत्य कुराले पनि व्यापारमा सोच्न नसकिने चोट पुर्याउन सक्छ । जस्तै २०१६ मा टेस्लाका मालिक एलन मस्कले आफ्नो कम्पनी आगामी इलेक्ट्रिक कारका लागि प्यानासोनिक कम्पनीसँग काम गर्ने भन्दै ट्वीट गरेपछि ब्याट्री निर्माणकर्ता सामसुङको एसडीआइको बजार भाउ ५० करोडले घटेको थियो । यसरी अरुको पोस्टले मात्र होइन आफैँले पनि सामाजिक संजालमा लेख्दा ध्यान पुर्याएन भने त्यसले समस्या गराउने गर्दछ । यसअघि युएस बैंकले कम ब्याङ्क ब्यालेन्स भएका ग्राहकहरुले ट्याक्सी नचढेर र धेरै कफी नखाएर पैसा जोगाउन सक्ने भन्दै पोस्ट गरेपछि कम्पनीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
त्यस्तै अन्जान ग्राहकका पोस्ट अरुले भेटेर शेयर गर्दा पनि उत्तिकै हानि पुग्ने गर्दछ । ग्लोबल पिआर एजेन्सी फ्लेइसमनहिल्लार्डका सोसल मिडिया निर्देशक क्लेर टाउनहिल भन्छन्, “कस्टुमर सर्भिसको जवाफ पाउन सामाजिक संजाल सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो भन्ने ग्राहकहरुले पनि बुझिसकेका छन् । त्यसैले सामाजिक संजालमार्फत सिधा प्रहार गर्नुले कम्पनीको आपूर्तिमा समस्या आउनुका साथै लोकप्रिय सामानमा समेत बदलाव आउन सक्छ ।”
यसैकारण सधैँ तयार र सतर्क रहनुपर्ने अनि उचित योजना पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर त्यसो भन्दैमा ससानो कुरामा पनि हामीले ‘ओभर रियाक्ट’ जनायौँ भने फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । सकेसम्म नकारात्मक टिप्पणीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नु नै व्यवसायका लागि उपयुक्त हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
घिउकुमारीका यी फाइदाबारे थाहा छ ?
लगातार दुई स्वर्ण जितिन् निमा घर्ती मगरले
प्रतिनिधिनको नक्कली कार्ड बनाएर गणनास्थलमा छिरेका दुईजना प,क्राउ
विवादका कारण स्थगित साँफेबगरमा आज पुनःमतदान
गोदावरीमा गठबन्धनका उम्मेदवार मेयर र उपमेयरमा विजयी
हार्दिक पटेलले पार्टीबाट राजीनामा दिए
ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा कार्की र थापा निर्वाचित